သတ်မှတ်ချက် & အခြေအနေများ
ဒီမြှင့်တင်ရေး 5th အပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည်, 12ကြိမ်မြောက်, 19ကြိမ်မြောက်နှင့် 26 ဇန်နဝါရီလ 2017 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -9.30hrs, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8hrsTo ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.
အသီးအသီး၏အမြင့်ဆုံးခံယူမည်လှည့်ဖျား Starburst onlyPlayers အပေါ် 10p နှင့်တရားဝင်တန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည် 25 ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ် Starburst အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
အခမဲ့လှည့်ဖျားအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
အလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်သာ Starburst ကိုဖွင်ရမယ်
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement.
အောက်ပါပိုက်ဆံအိတ်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်နှင့်ဤနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်: ရီးရဲလ်ငွေစာရင်း, အပိုဆုပြီးတော့ FreeSpin ဆုကြေးငွေ.
ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေအလှည့်တရားဝင်ဆက်လက်တည်ရှိအသိအမှတ်ပြု7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ဒီမြှင့်တင်ရေးမှကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာ FreeSpin ဆုကြေးငွေတစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေ queueManagement ကြည့်ရှုရန်အပိုင်းကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – 100% match up to £100 +…
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – Gonzo’s Quest for Love –…